साहित्य/अनुभूति : समय र स्वयंको कलिलो कमाण्डर - Rojgar Manch
शनिबार, २४ साउन, २०७७
लकडाउनको सुरुका दिनमा निकै डराएजस्तो लाग्थ्यो ऊ ।
०७२ को भुकम्पकाबेला पनि निक्कै त्रसित थियो । वैसाख १२ गते मेरो परिवारका सदस्यसहित केही आफन्त पनि मेरै घरमा सुतेका थियौँ । राति पनि भुकम्प आउँछ रे भनिरह्यो पटकपटक । निन्द्रा लागेको थिएन उसलाई ।
त्यसैले ११ बजे राति घरछेउको खाली जमीनमा त्रिपाल टाँगेर सुतेका थियौँ । अनि ऊ निदाएथ्यो ।
त्यसपछिका झट्काहरुमा पनि निकै डराएको थियो । मेरै काखमा हुँदासमेत उसले सुरक्षित महसुश गरेन । आत्तिएर बाहिर निस्किन्थ्यो । भाग्न नदिँदा चिच्याएर रुन्थ्यो । त्यसबेला ७ वर्षे सुशानको चेतना आज हुर्केर १२ वर्षे भएपछि जीवन र मृत्यु पनि बुझ्ने भइसके जस्तो लाग्छ ।
जीवन बुझाइसँगै त्रासको मात्रा पनि बढेको अनुमान गरेर ऊप्रति सचेत भयौँ हामी ।
चैत ११ मा लकडाउन सुरु हुँदा ४८ दिनदेखि प्रहरी अस्पतालमा हुनुहुन्थ्यो आमा । अस्पतालले सबै बिरामीलाई डिस्चार्ज गर्न थाल्यो । चैत १३ गते पचासौँ दिनमा आमा पनि डिस्चार्जमा पर्नुभयो र अस्पतालकै गाडिमा घर आयौँ ।
अनेक रोगको उपचार गर्ने अस्पतालसमेत त्यसरी सचेत भएपछि लापरबाह हुनु थिएन हामीलाई । परिवारमा पाँचैजनाको कोठा र ओछ्यान अलगअलग भयो । माथिल्लो तलामा सुत्नेले तल्लो तलाको बाथरुम प्रयोग नगर्ने, तलकाले माथिको नजाने यस्तो केही आचार संहितामा लागु गरियो ।
पर्याप्त सावधानीका साथ भान्सा र टिभीरुम मात्र एकै थियो ।
अब केही दिन एकअर्कालाई नछाऔँ, अलग्गै सुतौँ । हाम्रै लागि त हो । सुशानलाई सम्झाएँ । उसले सहज लियो । दैनिकका समाचार र घरमै एकअर्काको साबधानीले डर पलाएको जस्तो लाग्यो ।
तिमी डरायौ कि क्यो हो ? मैँले सोधेँ । छैन । किन डराउने र ? लजाएझैँ मुस्कुराएर जवाफ दियो ।
दैनिक आउने समाचारमा भने खुब चासो गथ्र्यो । सरकारले यसो भन्यो, आज यतीजनालाई कोरोना लाग्यो, अमेरिकामा यती मरे जस्ता समाचार हामी सबैलाई सुनाउँथ्यो ।
दिन बित्दै गए । संसारभर संक्रमित र मृत्यु हुनेको संख्या बढ्दैथियो । भारतमा उकालो लागेसँगै नेपालमा पनि अंक जोडिँदै थियो । भारतमा नरोकिए नेपालमा रोकिन्न भन्थ्यो ऊ पनि । अमेरिका र इटालीको लापरबाहीका बारेमा चर्चा गर्न तम्सिन्थ्यो । सँगसँगै मन बलियो बनाएजस्तो तर कतिपय उसका क्रियाकलापबाट थाहा नपाइ डराएजस्तो देखिन्थ्यो ।
सुशान भनेर बोलाउँदा पनि तसिन्थ्यो, उसको छेउमा जाँदा झसङ्ग हुन्थ्यो र हाँसेर टारिदिन्थ्यो गथ्र्यो । किन तर्सेको भनेर सोध्दा खोइ म किन तर्सेको भनेर अन्यौल जनाउँथ्यो ? उसले आफू डराएको स्वीकार गरेपछि अलिकति सहज भयो उसको अवस्था बुझ्नलाई ।
पढाइबाहेक रेडियो नाटक गर्न, अलेली कविता, कथा कथ्न पनि रुची थियो उसको ।
तिमी साना बालबालिकाहरु मध्ये अगुवा हौ । अगुवाहरु बिचलित हुनु हुन्न है भनेँ मैँले ।
त्यस्तो होइन हौ आफैँ के हुन्छ के, म के जान्नु भन्यो ।
डर त्रासले मान्छेमा मानसिक समस्या आउनसक्ने आँकलन सुरु भइसकेको थियो विज्ञहरुबाट । त्यस्तो अवस्थामा परामर्श गर्न केही नम्बरहरु सार्वजनिक भएका थिए । मैँले केही नम्बरहरु खोजेँ ।
र उसलाई भनेँ तिमी नडराए पनि थाहै नपाइ तिम्रो मन डराएको हुनसक्छ । अरुलाई पनि यस्तो हुन्छ सक्छ । मैँले केही नम्बर पत्ता लगाएको छु । म फोन लगाईदिन्छु तिमी एक्लै कुरा गर भनेँ । उसले हस् भन्यो ।
यसको अर्थ उसलाई पनि नजानिँदै आफुमा आएको समस्या थाहा थियो र समाधान खोजिन लाग्दा खुशी थियो ।
मेरो हात परेका दुईवटा नम्बरमा लगातार दुई दिन फोन गरेँ । एउटा उठेन, अर्कोमा लाग्दै लागेन । यस्तो संवेदनशील विषयमा नउठ्ने र नलाग्ने फोन किन सार्वजनिक गर्नु ? नरमाइलो लाग्यो ।
ऊ पनि निराश भयो । झन डराएजस्तो भयो ।
एकछिन मौन रहेँ, सोचेँ । मेरो मन बोल्यो ‘मसँग आफ्नै बाबुआमा बाहेक अरु कसले आफ्ना सन्तानको मनोदशा बुझ्नसक्छ ?’
मनोदशा बुझेपछि परामर्श दिन पनि के कठिन भयो र ? आफ्नै छोराको बलियो साथी बन्नुपछै अब । निर्णय लिएँ ।
सबैभन्दा पहिले कोराना समाचारबाट उसको ध्यान हटाउनु पर्छ । निश्चय गरेँ । उसको नाममा इमेल खाता खोलेर युटुव खोल्न लगाएँ । ऊ केही उत्साहित देखियो ।
बाबा छोरा गीत गाउने, मोबाइलबाटै खिचेर हाल्ने । उसले हारमोनिम बजाएको भिडियो हाल्ने, नयाँ वर्ष शुभकामनासमेत परिवारै बसेर बनाउने अनि हाल्ने । यस्तै क्रम चल्न थाल्यो ।
भिडियो इडिट गर्ने ढंग नभएकाले खिच्दाखेरी नै नबिगारी खिच्नुपर्ने वा बिग्रेमा फेरि अर्को खिच्नुपर्ने बाध्यता थियो ।
उसको ध्यान अब भिवर्स, लाइक र कमेण्टतिर मोडियो । आशावादी भएँ म ।
तर एकाएक गुगलले उसको उमेरमा शंका गरेर फोटो पठाउन भन्यो । र बन्द गरिदियो खाता । उसका भिडियोहरु खुल्न छाडे, इमेल पनि खुलेन । उ निराश बन्यो । तर हारेन ।
उसैले केही चलाखी गरेर फोटो पठाएपछि गुगल झुक्कियो र फेरि सुरु भयो खेती ।
घरमा नेट थिएन, डाटा छिनमै सकिन्थ्यो । पढाइका कुरा गरेर कमभन्दा कम उसको रहोस् भन्ने चाहन्थी ममी ।
तर उसलाई पढ्नु थिएन । ६ कक्षाको परिक्षा सकिएको र नतिजा आएको थिएन । ७ कक्षा सुरु भइनसकेकाले पढ्ने पुुस्तक पनि थिएन ।
एक पटक पढिसेका बाल पुस्तक एकदिनमा सकिहाल्थ्यो । के पढ्ने अरु ?
अब कथा लेख, दैनिकी लेख । पछि ठुलो भएपछि पढ्दा आनन्द आउँछ । बिर्सेका कुरा पनि थाहा हुन्छ भनेर उचालेँ । नियमित दैनिकी लेख्न थाल्यो ।
ममीले सामान्य ज्ञानको पुस्तक थमाइ र भनी दिनमा पचास वटा प्रश्नको उत्तर याद गर्ने अनि बाबाले खिचेर युट्युबमा हाल्ने ।
मोबाइल खेलाउनको हतारोले एकघण्टा नपुग्दै घोकीसक्थ्यो । अझै अलमल्याउन उल्टोसुल्टो तलमाथि दुबैतिरबाट सोध्न थालेँ । ऊ खराखर भन्थ्यो ।
युटुबमा उसका भिडियोको संख्या बढ्दै थियो । आफन्तबाट आएका कमेण्टबाट उत्साहित भयो ।
स्कुलले अनलाइन कक्षा लिनका लागि भन्न थालिसकेको थियो ।
दुईचार महिना नपढेर आकास खस्दैन । बालबालिकालाई अनावश्यक मोबाइल र कम्प्युटरमा झुम्मिन बाध्य नपारौँ । भार हुन्छ । मैँले उसैका अगाडि स्कुललाई जवाफ दिएँ ।
वार्षिक परिक्षा दिएर बसेका बालबालिकालाई रिजल्ट नदिई के पढाउनु हुन्छ ? तपाइका सबै विद्यार्थी समावेस हुन सक्छन् ? सबैको पहुँच छ इन्टरनेटमा ?
एकातिर उनीहरु आफुले चाहेको कुरा नहेरी छाड्दैनन्, गेम नखेली छाड्दैनन्, त्यसमाथि स्कुलको अनलाईन । यसरी त एडिक्ट बन्छन् इन्टरनेटका । मेरा जवाफले स्कुल त हच्कियो नै सुशान पनि उत्साहीत भयो । म सफल भएँ ।
पढ्नु नपरेकोमा नै बढेको थियो उसको खुशी र घटेको थियो तनाव । नयाँ पाठ्यक्रम र रिजल्टविनाको पढाइ एक ढोँग र अभिभावकका आँखामा छारोबाहेक अरु केही थिएन पनि ।
वैसाख ४ गतेबाट मेरो अफिस घरमै भयो । केही साथीहरु अफिसमै बसेर सहजीकरण गर्ने अरु बाँकी घरैबाट रेडियो प्रसारणमा काम गर्ने भयौँ । महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले व्यारेकमा बस्ने कर्मचारी व्यारेकबाटै सडकमा खटिने र डेरा बस्नेहरु अफिस नआइ डेराबाटै डिउटी जाने आदेश गरेको थियो ।
मलाई परिवारसँग अलगिएर व्यारेकमा बस्नु थिएन । त्यसका लागि घरमा नेट जोड्नै पर्ने बाध्यता आइलाग्यो । छिमेकी अमृत थोकरको वाइफाइ कनेक्ट त गरियो तर घरमा सबैतिर चलेन । ग्राउण्ड फ्लोरको दक्षिणकोठाको एउटा कुनोबाट मुस्किकले दुईदिन चलाएँ ।
बिहान ५ देखि बेलुकी ८ बजेसम्म निरन्तर काम गर्नुपर्थो । तार र राउटरको बिकल्प देखिएन । तर कहाँबाट ल्याउने यस्तोबेलामा, कतै पसल खुल्ला छैनन् ।
छिमेकी सरोज श्रेष्ठको आफ्नै घरमा रहेको बन्द पसलबाट किनेँ तार । बालुवाखानीमा भाइ प्रमेशको बन्द पसलबाटै उसले चलाउने गरेको पुरानो राउटर ल्याएँ । काम चल्यो ।
सबै तारतम्यको सहयोगी सुशान नै बन्यो ।
तैपनि घरिघरि नेट डिस्कनेक्ट हुने, दश वर्षे पुरानो ल्यापटपले पुरानो पारा देखाइरहन्थ्यो । मोबाइलको हटस्पटबाट वाइफाइ चलाउने, एपबाट स्पीड चेक गर्ने, घरिघरि नेट कनेक्ट गराइदिने काम अब सुशानकै जिम्मेवारी बन्यो ।
नेट जोडेकाले ऊ पनि खुशी थियो । यसअघि पटकपटक नेट जोड्न गरेको उसको आग्रह इन्कार गरेको मैँले आज बाध्यताबस जोडेको थिएँ ।
बिहान पउने पाँचको अलार्म लगाएर उठ्नु पर्ने भयो मैँले । ऊ पनि पो आफ्नो मोबाइलमा अलार्म लगाउन थाल्यो । बाबालाई प्रविधीमा सहयोग गर्न रे । जो अरुबेला ७ बजे उठाउँदा पनि रिसाउँछ तर आज ५ नबजी उठ्न खोज्दैछ ।
अलिकति नमीठो र अलिकति आनन्द पनि लाग्यो, १६ वर्षमा साथी बन्छन् भन्थे सन्तान, १२ वर्षमै साथी बन्न चाहेको उसको आत्मियताले पगाल्यो मलाई । पर्दैन तिम्रो अलार्म नलगाऊ । तिम्रो खाँचो परे म आफैँ तिमीलाई उठाउँला भनेँ ।
कम्प्युटरको ‘क’ जानेको साठीको दशकमा मात्र हो मैँले । ०६२ सालमा प्रहरी प्रधान कार्यालय काठमाडौँ आएपछि नजानी सुख थिएन । अफिसमा जे समस्या परे पनि सम्बन्धित कर्मचारी भइहाल्थे । सानोतिनो समस्या पनि सुल्झाउन नआउने रहेछ मलाई । आज ज्ञात भयो ।
वाइफाइले भएन तार जोड्नु प¥यो उही, तारमा समस्या हाइलाग्यो कनेक्सन गर्न उही, स्पिड कम भो कारण थाहा पाउन उही, भिवरबाट अफिसको कम्प्युटरमा काम गर्नुपर्ने, जुममा बैठक गर्नुपर्ने । त्यसमा आइपरेका समस्या र सामान्य अन्य सहजीकरणमा ऊ नै हुन्थ्यो हरदम ।
जतिबेलै उसलाई खोजिरहने बानी परेछ मलाई पनि ।
ल्यापटपमा तार जोड्दा उसले नेट चलाउन, गेम खेल्न र उसको रुची अनुसार अन्तरिक्ष सम्बन्धी भिडियो हेर्न पाउँदैनथ्यो । सकेसम्म ल्यापटपमा तार जोड्नेभन्दा वाइफाइबाटै नेट चलोस् भन्ने उसको चाहना थियो ।
नेट चल्नै पर्ने समान स्वार्थका सहयात्री मात्र बनेन प्रविधिको कमाण्डर पनि बन्यो ऊ । ऊ नभई मेरो जागीर नचल्ने जस्तो भएपछि उसलाई पनि बाबालाई सहयोग गर्न पाउँदा आनन्द लागेको देख्थेँ ।
म बुबाको सहयोगी भएको थिएँ रे सानोमा । म आठ वर्षको थिएँ बुवा बित्नु भयो । आमाले सुनाउनु हुन्छ जता जाँदा पनि बुबाले तँलाई लिएर हिँड्नुहुन्थ्यो, सहयोगी छ, कुरा बुझ्छ भन्नुहुन्थ्यो रे । नोस्टाल्जिक भएँ आज सुशानका कारण ।
डिउटी नपरेका दिन उही पुरानै रुटिन थियो योग, ध्यान, छतमा स्किपिङ, डान्स र भिडियो रेकर्ड । बिगतभन्दा अझ घनिष्ठ र परिपक्व बन्दै गयो बाबु छोराको सम्बन्ध । बाबु छोराभन्दा बढी सहकर्मी वा मित्र हुँदैगयौँ ।
उसले पनि भिडियो इडिटिङ गर्न सक्ने भयो । आवश्यक धुन मिसाउन र विभिन्न दृष्य जोड्न सक्ने भयो । एउटा क्षमता थपियो ।
पढ्न, खेल्न र मोबाइल चलाउन बनाएको रुटिनमा विवाद भइरहन्थ्यो आमा छोराबीच । नियम तोडेको भएपनि मैँले सकेसम्म उसकै पक्षमा फैसला गरिदिन्थेँ ।
उसले चाहेको विषयमा केहीबेर नेटमा बस्न पाउने भएपछि ऊ पनि खुशी । उसको मनबाट अरु डर हराउँदै जान थाले ।
डाक्टर रविन्द्र समीरले कोरोना सम्बन्धी सधैँ सकारात्मक र ज्ञानबर्धक कुराहरु साझेदारी गर्नुहुन्छ । उसले पनि सिक्यो बालबालिकाको संक्रमण र मृत्यु दर निकै कम छ भन्ने कुरा । ८० प्रतिशतलाई संक्रमण भएको थाहै नपाइ निको हुने कुरा उसैले सुनाउन थाल्यो हामीलाई । र त उसको तर्सिने र डराउने कुरा बिगत बन्यो ।
बाबा ! हामीलाई पनि संक्रमण भइवरी निको भइसक्यो होला । यसो भन्यो एक दिन ।
हो र ? कसरी ? मैँले सोधेँ ।
७५ वर्षको हजुरआमालाई खोकी लागिरहेको थियो, मलाई पनि रुघा लागेको थियो, ममीलाई पनि हाच्छ्यौँ आइराथ्यो । अहिले त केही छैन । त्यतिबेला कोरोना लागेको पनि हुनसक्थ्यो ।
यसरी आफैँ मिलाएर कुरा बुझेपछि उमाथिको हाम्रो चिन्ता सकियो ।
मान्छेहरु किन लकडाउन उल्लंघन गरेका होलान्, किन सरकारले धेरैजनाको पिसिआर नगरेको ? विश्व स्वास्थ्य संगठनले नस्वीकारेको आरडिटी किन प्रयोगमा ल्याएको ? किन ट्रम्पले मास्क नलगाएको ?
यी र यस्ता विषय खोजीखोजी बहस गर्न थाल्यो अब ।
भारतमा स्मार्ट फोन नपाएर बालिकाले आत्महत्या गरेको, पोखरामा एक बालकले पासो लगाइ आत्महत्या गरेको, नायक सुशान्तसिंहको आत्महत्या किन जायज छैन, आत्महत्या समस्याको समाधान किन होइन ?
आत्महत्या भन्दा संघर्षको जीवन कैयौँ गुना उपलब्धीमूलक छ भन्ने जस्ता विषय बहसमा निकाल्न थालेँ म पनि ।
चियासम्म बनाउन नसिकेको उसले हरेक साँझ खाना पकाउन ममीलाई पालो दिने भएको छ ।
सिस्नुको तरकारी सबैभन्दा बढी उसैले खानुपर्ने भएपछि आफैँ भान्से लाग्न र पस्किन अघि सर्ने भएको छ ।
सिस्नु पकाउने तरिका र त्यसका फाइदाका बारेमा भिडियो बनाएर अपलोड गरेको छ ।
सबैको लुरे, सधैँको लुरे, केही खाँदैन । किन खाँदैन, आन्द्रा त सुक्दैन ? यस्तै प्रश्न बोकेर डाक्टर अरुण शर्मा र उनको टिमलाई त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा पटकपटक देखाएकी छ ममीले ।
आफैँले पकाएर खाँदाको पौरखले होला आज उसको खुराक बढेको छ । उसका गाला लागेका छन् । सिक्स प्याकको भूत सवार हुन थालेको छ आजकाल ।
सायद मैँले कोरोना संग्राम लड्ने एउटा आत्मविश्वासी सहयोद्धा मात्र होइन ऊ स्वयंका लागि एउटा बलियो कमाण्डर बनेको छ ।
अहिले ऊ क्रमशः स्कुलका अनलाईन र रेडियो टिभीका कक्षामा सहभागी हुन थालेको छ । होमवर्क गर्न थालेको छ, पाठ्यपुस्तक पल्टाउन थालेको छ । कविता र कथा बाचनमा रमाउन थालेको छ ।
नेपालमा दुईहजारभन्दा बढी बालबालिका संक्रमण भएकोबाट पनि उसलाई डर लागेको छैन । निको भएकाहरुको पनि कुरा गर्न थालेको छ ।
टोलछिमेकका थुप्रै बालबालिका लकडाउन अबधिभर जहिल्यै सडक र चौरमा खेलिरहे । तर उसले आजसम्म घरबाट बाहिर निस्किन्छु भनेको छैन । बालबालिकाले साथीसँग खेल्न नपाउनु वा नखेल्नुजस्तो त्याग के हुनसक्छ ? समयानुकल त्याग सिकेको छ उसले ।
सायद त्यसको बिकल्प उसले घरभित्रै पाएको हुनुपर्छ ।
स्कुल पढ्न पाएनन् भनेर अभिभावकले चिन्ता गरेको सुनिन्छ । तर यति ठूलो शिक्षा बालबालिकालाई समयले आफैँ दिएको छ । त्यो आजको स्कुलले कहाँ दिएको छ र ?
उपाय अनेक हुनसक्छन् । आफ्ना घरका कमजोर र डराएका बालबालिकालाई कसैको सहयोगविना नै कोराना युगसँग अभ्यस्त हुनसक्ने कमाण्डर बनाउन सक्नेरहेछौँ ।
आफ्ना बालबालिकासँग घरैमा बस्न पाएका भाग्यमानी छौँ भने त्रासले होइन आँटले डट्न सक्ने बालबालिका बनाऔँ । बलियो मनका आत्मविश्वासी बालबालिका निर्माण गर्नसक्ने रहेछौँ ।
समयले मलाई सिकाएको महाज्ञान हो यो । तपाईंसँग अनेक हुनसक्छने यस्ता सिकाइहरु । सिकाइको सृङ्खला हो जीवन । त्यसलाई बाडौँ र एकअर्कालाई बलियो बन्न बद्दत गरौँ ।
सिसिएमसी बैठक : जोखिमको अवस्था मुल्यांकन गरी सबै देशहरुमा उडान अनुमित दिने निर्णय
कोरोना संकट व्यवस्थापन केन्द्र सीसीएमसीले संक्रमणको जोखिमको अवस्था मुल्यांकन गरी सबै देशहरुमा उडान अनुमित दिने निर्णय गरेको छ । आज […]
उर्जा बचत कार्यमा संलग्न विभिन्न कम्पनीलाई राष्ट्रिय बाणिज्य बैकद्धारा अनुदान रकम हस्तान्तरण
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकद्धारा जर्मन सरकारबाट KFW बैंक मार्फत प्राप्त अनुदान सहयोगमा संचालित ‘Energy Efficiency Program Nepal’ को अनुदान सहयोग कार्यक्रम […]
काठमाडौ उपत्यकाका ९४७ सहित देशभर थप १७९० जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि
पछिल्लो २४ घण्टामा काठमाडौ उपत्यकाका ९४७ सहित देशभर थप १९८० जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जानकारी […]
एनआरएनए कतारद्वारा अहिलेसम्म ४४ जना नेपाली श्रमिकलाई हवाई टिकट सहयोग
गैरआवासीय नेपाली संघ कतारले अहिलेसम्म पीडित तथा आर्थिक अभाव भएका ४४ जना नेपालीलाई हवाई टिकट सहयोग गरेको छ । पछिल्लो […]
बैतडीमा जिप दुर्घटना हुदा ५ जनाको मृत्यु, ४ जना घाइते
बैतडीको दशरथचन्द नगरपालिका-१० बुड्ढामा बोलेरो जिप दुर्घटना हुँदा ५ जनाको मृत्यु भएको छ । दुर्घटनामा परी ४ जना घाइते भएका […]